Madaxda FIFA Oo Lagu Eedeeyey Mushahar Korodhsi Gaadhaaya 4 Milyan Oo Dollar | Hawraar
June 3, 2016 Xiisaha/Xulashada
Madaxda FIFA Oo Lagu Eedeeyey Mushahar Korodhsi Gaadhaaya 4 Milyan Oo Dollar
Garyaqaanada FIFA, ayaa sheegy in saddexda nin ee ugu sareeya guddiga kubbadda cagta ay korodhsadeen mushaarkooda iyo gunnooyinka iyagoo ka dhigay guud ahaan sideed milyan.
Wuxuu ururka kubbadda cagta daboolka ka qaaday qandaraasyada madaxweynihii hore Blatter iyo eryidii maalin kaddib xoghayihii guud ee hore Valcke iyo madaxii lacagta Kattner, markii booliska Swiss galeen xarumahooda. Waxay qareenadoodu sheegeen in saddexduba ay sameeyeen howl isku xidhan oo ay isku naaxinayeen intii u dhexeysa sanadihii 2011kii iyo 2015kii.
Qoraalo iyo xogta kombuyuutarada laysugu gudbiyo ayey ku qaateen intii uu socday howlgalkii khamiista, kuwaasi oo baadhayaashu la xidhiidhinayeen Blatter iyo Valcke.
Shakiga ah in si sharci darro loo maamulay lacagta FIFA, ayaa keenay in guddiga anshaxa ka joojiyaan cayaaraha Blatter lix sano iyo Valcke 12 sano bishii Februaray, balse labaduba waa diideen inay wax qalad ah galeen.
Qoraal laga soo saaray xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Switzerland oo baadhistan sameeyay ayey ku qornaayeen in qoraalada iyo xogta la helay hadda la baadhi doono si loo go’aamiyo xidhiidhka ay la leeyihiin dacwadda socota.
FIFA, ayaa sheegtay in cadeymaha ay ku heleen baadhistooda gudaha ay la wadaagi doonaan xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo waaxda cadaaladda Mareykanka.
FIFA, ayaa jahwareer ku jirtay ilaa May 2015kii, markaas oo baadhayaal Mareykan ah ay soo bandhigeen musuqmaasuq baahsan oo ka dhex jiray madaxda ugu sareysa ururka.